60 Minamato Yemazuva Ose Kutungamira kwaMwari | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 60 minamato yemazuva ese yekutungamira kweHumwari
60 minamato yemazuva ese yekutungamira kweHumwari
Ndifambisei, Jehovha, mukururama kwenyu nekuda kwevavengi vangu; Ruramisa nzira yako pamberi pechiso changu.
Ishe ndiye mufudzi wangu, handingadi, iro panemazwi eunyori hwevanyori vePisarema mubhuku reMapisarema 23: 1. Tenzi wedu Jesu Kristu ndiye mufudzi akanaka, Haazombotitungamira mukuvhiringidzika kwehupenyu, asi Anotitungamira padivi pemvura yehupenyu. Nhasi tichave tichiita minamato makumi matanhatu nemashanu yemazuva ese kuti titungamire Mwari. Divine kutungamirirwa ichokwadi, uye Mwari achiri mubhizinesi rekutungamira vana Vake. Hapana chigadzirwa chinogona kukwidziridzwa pasina bhuku remugadziri. Iyo inogadzira manyorero ndiyo inotitungamira kuwedzera chinangwa chechinhu chero chipi zvacho chatakatenga. Nenzira imwecheteyo, Mwari ndiye mugadziri wedu uye izwi rake ndiro bhuku redu, uye isu tiri chigadzirwa Chake, kana seizvo bhaibheri rinoisa iro basa rake, VaEfeso 2:10. Naizvozvo tinofanira kugara tichibvunza mugadziri wedu kuti atiudze nezve chinangwa chehupenyu. Nzira yakanakisa yekutungamira kwehungwaru uye nehungwara kunaMwari kubva kuna Go kuburikidza minamato yezuva nezuva uye neshoko raMwari.
Minyengetero yanhasi yezuva nezuva yekutungamirirwa kutsvene ndeyeavo vari kutsvaga nhungamiro yaMwari maererano nenyaya dzeupenyu. Nyaya dzakadai: muchato, bhizinesi, basa, kufona, vana, mhuri nezvimwe Mwari havazombotisiya murima nezve hupenyu hwedu, asi tinofanira kudzidza kudaidza kwaari muminamato. Ivo chete ndivo vanokumbira nhungamiro vanozoifarira, Mateo 7: 7-8. Tinofanira kukumbira Mwari muminamato, usatore matanho akakosha kana kuita nhaurirano dzakakosha nezvezvinhu zvehupenyu hwako usina kukumbira Mwari gwara. Paunenge uchiita iyi minamato yezuva nezuva yekutungamirirwa naMwari nhasi, ndiri kuona Mwari achipedza nyonganiso nekusagadzikana muhupenyu hwako muzita raJesu.
Isu tinoshumira Mwari anoziva zvakavanzika zvese, Dheuteronomio: 29: 29, hapana chakavanzika kubva Kwaari, hapana chinhu pamusoro pehupenyu hwako chinogona kutombotora Mwari nekushamisika, Iye anoziva zvese zvinobvira muhupenyu hwako, kunyangwe zvingaitika sei. Kana uchida divi muhupenyu hwako, Mwari ndiye ega Tsime rako. Iye ndiye mugadziri wako, uye sekureva kwaakaudza Muporofita Jeremiah, muna Jeremiah 1: 5, Iye akati usati waberekwa ndinotoziva chinangwa chako uye zvaunozoita muhupenyu (paraphrased). Uku ndiko kutiudza kuti, Mwari chete ndiye anogona kutiudza gwara rekuenda muhupenyu, kwete mudzidzisi wedu, kwete vabereki vedu uye zvirokwazvo kwete shamwari yedu asi Mwari uye iye oga Mwari. Tinofanira kudzidza kuita minamato yemazuva ese yekutungamira kwake, tinofanira kudzidza kugara tichimukumbira muhurukuro dzenyu dzose, tinofanira kuramba hupenyu hwemiedzo uye nekukanganisa. Ndiri kuona Mwari achivhura maziso kuti uone nzira chaiyo ine chekuita neupenyu hwako muzita raJesu. Namata munamato uyu uine kutenda uye ugamuchire kutungamira muzita raJesu.
1. Rumbidzai Ishe nenziyo kwemaminetsi gumi kana anopfuura.
2. Tenda Mwari nekuda kwesimba reMweya Mutsvene.
3. Tenda Mwari nekuda kwesimba rekuchenesa kweMoto weMweya Mutsvene.
4. Ndinozvifukidza neropa raIshe Jesu.
5. Baba, chengetera moto wako unopisa zvese dhavha remuvengi riwire pamusoro pangu, muzita raJesu.
6.Mweya Mutsvene moto, mundinyise, muzita raIshe Jesu Kristu.
7. Ini ndinoramba chero chitambi chakashata kana chisimbiso, chakaiswa pandiri nemweya yemadzitateguru, muzita raJesu.
8. Ndinozvisunungura kubva pakuzodzwa kwakashata kese, muzita raJesu.
9.Musuwo wese wekutsiva kwemweya, pedyo, muzita raJesu.
10. Ndinodenha nhengo yega yega yemuviri wangu nemoto weMweya Mutsvene. (Isa ruoko rwako rwerudyi pane dzakasiyana nhengo dzemuviri wako, kutanga kubva kumusoro), muzita raJesu.
11. Wese mweya wemunhu, unorwisa mweya wangu, ndisunungure, muzita raJesu.
12. Ini ndinoramba mweya yese yemuswe, muzita raJesu.
13. Imba rwiyo: "Moto weMweya Mutsvene, moto wira pandiri."
14. Zviratidzo zvese zvakashata mumuviri wangu, zvinopiswa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
15. Kuzodzwa kweMweya Mutsvene, ndokuwira pandiri ndikatyora joko risirite, muzita raJesu.
16. Nguo yega yega yeakudzivisa uye yetsvina, ngaipedzwe nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
17. Makomborero angu ese akasungwa, ngavasungirwe, muzita raJesu.
18. Makheji ese epamweya, achitadzisa kufambira mberi kwangu, akagochwa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
19. O Ishe, ndipeiwo mweya wekuratidzwa uye nehungwaru mukuziva Iwe.
20 Haiwa, Ishe ,jekesa nzira yako pamberi pechiso changu pamusoro pechinhu ichi.
21. O Ishe, bvisai mweya wemweya kubva mumeso angu.
22. O Ishe, ndiregerereiwo pane zvese zvinangwa zvemanyepo kana fungidziro yakambove yakaumbwa mumoyo mangu kubva pazuva randakazvarwa.
23. O Ishe, ndiregerereiwo panhema dzipi zvadzo dzandakambomuudza kupokana chero munhu, system kana sangano.
24. O Ishe, ndinunurei kubva muuranda uye zvivi zveusimbe hwomweya.
25. O Ishe, vhura maziso angu kuti ndione zvese zvandinofanira kuona pane ino nyaya.
26. O Ishe, vhura maziso angu kuti ndione zvese zvandinofanira kuona pane ino nyaya.
27. Ishe, ndidzidzisei zvinhu zvakadzika uye zvakavanzika.
28 Ishe, vhenekerai zvinhu zvose zvakarongwa pamusoro pangu murima.
29. O Ishe, fungidzira uye muraramise izvo zvangu zvinobatsira.
30. O Ishe, ndipeiwo huchenjeri hwamwari kuti ndiite hupenyu hwangu.
31. O Ishe, dai chifukidziro chose chingandidzivise kuti ndirege kuona zvakanaka zvemweya.
32. O Ishe, ndipeiwo mweya wekuratidzwa uye nehungwaru mukuziva Iwe.
33. O Ishe, vhurai kunzwisisa kwangu kwemweya.
34. O Ishe, ndizivisei zvese zvandinofanira kuziva nezvenyaya iyi.
35. O Ishe, ndizivisei chakavanzika chose kuseri kwenyaya iyi kana ichibatsira kana kwete.
36. O Ishe, bvisai kubva kwandiri chero kuramba muchiviga chigumbu, kuvengana kune chero munhu uye chero chinhu chipi zvacho chinogona kuvhara kuona kwangu kwemweya.
37. O Ishe, ndidzidzisei kuziva izvo zvakafanira kuziva, uye kuda chii chakakodzera kuda uye kusafarira izvo zvisiri kukufadza Iwe.
38. O Ishe, ndiitire mudziyo unokwanisa kuziva zvakavanzika zvako.
39. Baba, muzita raJesu, ndinokumbira kuziva pfungwa Dzako, nezve (slot mune yakakodzera mamiriro) mamiriro.
40. Iwe mweya wechiporofita nekuratidzwa, wira pamusoro pezvese hupenyu hwangu, muzita raJesu.
41.Mweya Mutsvene, zivisa zvinhu zvakadzama nezvakavanzika kwandiri kwandiri (taura nyaya yacho) muzita raJesu.
42. Ini ndinosungira dhimoni roga roga rinosvibisa kuona kwangu uye zvemweya zviroto, muzita raJesu.
43. Tsvina yega yega, ichivharira pombi yangu yekutaurirana naMwari mupenyu, ishambidze yakachena neropa raJesu, muzita raJesu.
44. Ndinogashira simba rekushanda nemeso akapinza emweya asingagoni kunyengerwa, muzita raJesu.
45. Iwe kubwinya nesimba reWemasimbaose Mwari, wira pamusoro pehupenyu hwangu munzira ine simba, muzita raJesu.
46. ​​Ini ndinobvisa zita rangu kubva mubhuku revaya vanotsvaga uye vanogumburwa murima, muzita raJesu.
47. Zvizaruro zvehuMwari, zviratidzo zvemweya, zviroto uye ruzivo hazvizove chinhu chinoshomeka muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
48. Ini ndinonwa kusvika izere kubva kutsime reruponeso nekuzodza, muzita raJesu.
49. O Mwari uyo asina chakavanzika, chindizivisa kana, (taura zita rechinhu icho) uri sarudzo yako, kwandiri, muzita raJesu.
50. Chero zvifananidzo, zvirimo mumoyo mangu nehana kana kusaziva nezvenyaya iyi, zvinosungunuswa nemoto weMweya Mutsvene, muzita raJesu.
51. Ini ndinoramba kuwira pasi pekunyengedzwa kwemweya yekuvhiringidzika, muzita raJesu.
52. Ini ndinoramba kuita zvehezheni zvikanganiso mukuita kwangu sarudzo, muzita raJesu.
53. Baba Ishe, nditungamirire uye munditungamirire mukuziva pfungwa dzenyu pane iyi nyaya, muzita raJesu.
54. Ini ndinomira ndichipesana nezvisinamato zvese zvasatani zvingada kuvhiringidza sarudzo yangu, muzita raJesu.
55. Kana. . . (taura zita rechinhu icho) hazvisi zvangu, O Ishe chinja nhano dzangu.
56. Ini ndinosunga zviitiko zvemadhimoni kunyengera muzviroto nezviratidzo muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
57. O Mwari, Iye anofumura zvinhu zvakavanzika, ndizivisei chisarudzo chenyu pamusoro penyaya iyi, muzita raJesu.
58.Mweya Mutsvene, vhura maziso angu uye undibatsire kutora sarudzo chaiyo, muzita raJesu.
59. Tinokutendai Jesu nekuvapo Kwenyu uye ufakazi hwakanaka hunotevera.
60. Namata mumweya kwechingangoita maminetsi gumi nemashanu usati warara.
Previous nyaya100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano
inotevera107 Hondo dzeMweya minamato Yekukunda Vavengi Vako
PISAREMA 19 Zvinoreva Ndima Ndima
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Zvakaipa Zvirongwa